ISuperGIS - iGeofumadas
Umbono we-Geospatial ne-SuperMap
UGeofumadas uxhumane noWang Haitao, iSekela likaMongameli weSuperMap International, ukuze azibonele mathupha izixazululo ezintsha enkundleni yezemvelo, ezinikezwa yiSuperMap Software Co., Ltd. 1. Sicela usitshele ngohambo lokuziphendukela kwemvelo lweSuperMap njengomhlinzeki oholayo kusuka eChina Umhlinzeki we-GIS iSuperMap Software Co, Ltd. ingumhlinzeki omusha we ...
BIM I-Geospatial I-Geospatial I-GIS
Ukusebenzisa GIS ukulawula futhi kuvimbele udenga
Ngokwesimo sethu saseMesoamerican nasezindaweni ezishisayo zomhlaba jikelele, UDenga luyisifo esivamile ezinyangeni zesizini yemvula. Ukwazi lapho kwenzeka khona inani eliphakeme kakhulu lezehlakalo ngokuqinisekile kungukusebenza lapho izicelo ze-GIS zinikeza imiphumela ebalulekile. Ngiyakhumbula lapho ngiseyingane, udenga lwalungelona ...
SuperGeo ingena umfelandawonye GPS PL ukunikela turnkey izixazululo ye-iOS
ISuperGeo Technologies, imemezele ukusebenzisana okuthokozisayo ne-GPS PL, imodeli yomsebenzi edonsela ukunaka futhi ekhuthazwa nsuku zonke yizinkampani okuthi esikhundleni sokuncintisana nezimakethe, zenze ukusebenzisana ukuze zithole isipiliyoni esingcono sabasebenzisi. Lezi zinkampani ezimbili zinikeza izixazululo ze-GIS zamadivayisi eselula, ngenxa ye ...
GPS / Izinsiza kusebenza, SuperGIS
I-GIS Pro Uhlelo oluhle kakhulu lwe-GIS lwe-iPad?
Ngesonto eledlule bengikhuluma nomngani waseCanada ongitshele ngesipiliyoni ababa naso besebenzisa i-GIS Pro ezinkambisweni zokuhlola ze-cadastral. Cishe sesifikile esiphethweni sokuthi yize kukhona amanye amathuluzi, kusuka kulokho okuku-App Store lokhu uma kungenjalo okungcono kakhulu kwe-iOS, ...
Ukuqhathanisa phakathi kwe-ArcGIS ne-SuperGIS (okuyi-Spanish manje)
I-OpenSource ikhule ngamathuluzi anjenge-gvSIG neQuantum GIS, ithola ingxenye yengxenye ebanzi yemakethe manje emelela isoftware yama-geomatics. ISuperGIS ingelinye lalawo mathuluzi okuphathelene nawo, okuthi ngentengo ephansi ifune ukuzimisa ngaphambi kohambo olubanzi i-ESRI enalo kuze kube manje.
Izindaba ze-3 ezivela ku-Supergeo
Kubadali bohlobo lweSuperGIS sithola izindaba okufanele zisindiswe.Iminyango yaseFujairah Yemisebenzi Yomphakathi kanye Nezolimo Ukuthuthukisa ukusimama kwengqalasizinda ngeSuperGISFujairah ingelinye le-United Arab Emirates, eMiddle East. Banqume ukusebenzisa ubuchwepheshe beSuperGIS bokulawula umjikelezo wempilo wengqalasizinda, ...
GPS Android, SuperSurv kuyinto GIS omkhulu okunye
ISuperSurv iyithuluzi elenzelwe ngokukhethekile i-GPS ku-Android, njengesicelo esihlanganisa ukusebenza kwe-GIS idatha engabanjwa ngayo ensimini ngokuyimpumelelo nangokonga. I-GPS ku-Android Uhlobo lwakamuva, iSuperSurv 3 iguqula iselula ibe ngumqoqi, ngokuma kwendawo, ukubonisa imephu, ukubonisana, ukukala nokuqapha ...
GPS / Izinsiza kusebenza, kokuqala, SuperGIS
ISuperGIS Desktop, okunye ukuqhathanisa ...
ISuperGIS iyingxenye yemodeli yeSupergeo engikhulume ngayo ezinsukwini ezimbalwa ezedlule, ngempumelelo enhle ezwenikazi lase-Asia. Ngemuva kokuyihlola, nansi eminye imibono engiyithathile. Sekukonke, kusebenza cishe ngokuthi lwenziwa yiluphi olunye uhlelo oluncintisanayo. Ingasebenza kuphela ku-Windows, mhlawumbe ithuthukiswe ku-C ++, ye ...
ESRI I-GvSIG OS KML GIS ezininginingi shp
Geospatial - GIS, I-GvSIG, SuperGIS
SuperGIS, umbono wokuqala
Ngokwengqikithi yethu yasentshonalanga iSuperGIS ayitholanga isikhundla esibalulekile, kepha eMpumalanga, uma kukhulunywa ngamazwe afana ne-India, China, Taiwan, Singapoore -ukubala ambalwa- iSuperGIS inesikhundla esithandekayo. Ngihlele ukuwahlola la mathuluzi ngo-2013 njengoba ngenzile nge-gvSIG kanye ne-Manifold GIS; ngokuqhathanisa ukusebenza kwayo; okwamanje…
Geospatial - GIS, kokuqala, SuperGIS